Soo-saareyaasha Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Raw Testosterone Enanthate - Warshadda
Cudurka qaliinka testosterone waxaa lagu magacaabaa AAS sababtoo ah waa labadaba walxaha derajada ah ee testosterone iyo daawada loo yaqaan testosterone pro-drug, taasoo macnaheedu yahay in ay kiciso jirka si ay u soo saarto testosterone. Iyadoo la sheego, waxay leedahay saameyn xoogan oo istrogenic ah iyo kaliya saameynta anabolic ee dhexdhexaad ah.
Baaritaanka Root Testone Sooska (315-37-7) video
Tijaabinta Raw-ka-Root-ka Korontada (315-37-7) Sharaxaad
Daawada Raw bardaarka ah, oo lagu iibiyo hoosteeda Deluntaryl oo ka mid ah kuwa kale, waa dawada asaasiga ah iyo anabolic steroid (AAS) kaas oo badanaa lagu isticmaalo heerarka hoose ee testosterone ee ragga, iyo sidoo kale daahidda qaangaadhka wiilasha, iyo kansarka naasaha dumarka . Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daaweynta hoormoonka ee loogu talagalay raga iyo haweenka uurka leh. Waxaa lagu siiyaa murqaha sida caadiga ah laba jeer ama afar asbuucba.
Marka lagu daro isticmaalka daawada, baarista Testosterone Enanthate budada waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo jirka iyo waxqabadka. Daroogadu waa walxaha kontoroolka ah ee wadamo badan oo sidaas darteed isticmaalka aan caafimaadka ahayn guud ahaan waa sharci darro.
Tijaabinta Root-ka Kobcinta Biyaha (315-37-7) Smamnuucista
Product Name Testosterone Root tijaabo ah
Magaca Kiimikada Testosterone heptanoate; Imtixaanka tijaabada ah; Imtixaanka heptylate; Androtardyl
brand NAme Delatestryl
Maamulka Khatumo State Key VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
Molecular Wsideed 400.59
barafku Psaliid 34-39 ℃
Biological Life-Life Kaaritaanka Nolosha Nolosha (Hore) 4-5 maalmood
Codsiga Anogenogen. dhiska jirka
Waa maxay Baaritaanka Root Testosterone Enanthate (315-37-7)?
Baaritaanka kiniiniga 'enormthate' waa nooc ka mid ah daroogada iyo iyo kiimikada 'synthetic', waana qaybta synthetic ee testosterone proprionate iyo testosterone enantate .Tusaasaha kiniinnada enanthate oo loo yaqaan 'testosterone heptanoate', waa anabolic iyo daawada steroid (AAS) oo loo isticmaalo in lagu daweeyo heerarka hoose ee testosterone. Daroogooyinka anaboliyeed waxay ku shaqeeyaan dhisidda murqaha, halka xitaa orrogenic loola jeedo kordhinta sifooyinka lab ah ee lab ah.
Sidee loo tijaabiyaa tijaabinta tijaabada ah ee "Root Testoneone" (315-37-7)
Daawada kore ee budada loo yaqaan 'testosterone enanthate' ayaa ah steroids genus iyo stomoid anabolic taasoo loo isticmaalo daaweynta heerarka testosterone low. Maxaa macnaheedu yahay waa in loo isticmaali karo dhismaha muruqyada iyo kordhinta sifooyinka lab ah ee lab ah. Tani waxay sameeyneysaa iyada oo loo marayo beddelidda tijaabada baaritaanka oo laga yaabo in uu jirka ku yaraado.
Maanta munaasabado badan oo jirka ah ayaa isticmaalaya testosterone budo udub ah si loo xawilo dib u soo kabashada, baruurta gubanaysa iyo dhismaha murqaha. Maxaa ka dhigaya inay tahay mid caan ah waa waxtarkeeda waxtarka kuwa isticmaala inay qaataan keligiis ama ay ku daraan xarigooda steroid.
Tijaabinta qamriga ugu fiican (315-37-7)
Cudurka kaneecada (testosterone enanthate) waa dheecaan muuqaal ah oo huruud ah oo dheecaan leh oo laga helo saabuunta 5-Milliliter (mL) oo ah muraayad quraarad badan. Waa la isku durayaa gudaheeda galbeed midkiiba ilaa hal asbuuc. Si looga fogaado heerarka hoormoonka isbeddelka (iyo isbedelka niyadda ee la xidhiidha), qiyaasta hoose ayaa inta badan loo qoraa mudada gaaban.
Daroogada firfircoon, oo la hakiyey saliidda sisinta, waxay leedahay muddo sii dheeraynaysa laba illaa saddex toddobaad. Qiyaasta qiyaasta way kala duwanaan kartaa shakhsi ahaan laakiin waxaa sida caadiga ah loo qoraa sida soo socota:
Xumaanta labka ah: 50 ilaa millatariga 400 (mg) labadii ilaa afar asbuucba
Xilliga gaduudan ee gabdhaha: 5 ilaa 200 labadii usbuucba afar illaa afar ilaa lix bilood
Kansarka naasaha ee culus: 200 ilaa 400 mg labadii usbuucba mar
Daaweynta hoormoonada hormoonka Transgender: 50 Xoogaa 200 mg toddobaadkii ama 100 ilaa 200 mg labadii toddobaadba
Tijaabinta Rawada Kobcinta (315-37-7) Isticmaal
Imtixaanka kore ee tijaabada ah ee waxyeellada budadu waa isku mid sida kuwa ka mid ah testosterone acetate, oo ay ka mid tahay dhiirigelinta horumarinta xubnaha galmada ragga iyo sifooyinka galmada labaad iyo iska caabinta xayawaanka. Baarista kobcinta firiijka ayaa sidoo kale leh saameyn nafaqo leh, kaas oo u oggolaanaya inuu ku caawiyo koritaanka murqaha iyo miisaanka. Testosterone enanthate budada ayaa xakameyn kara qanjirada pituitary iyo kor u qaadista dheecaanka hoormoonka galmada, sidaas darteed hoos u dhigidda testosterone endogenous oo qarsoodi ah unugyada Leydig, taas oo ujeedadeedu tahay joojinta jeermiska shahwada.
Daawada kore ee tijaabada ah waxaa loo isticmaali karaa daroogada ilaalinta dhalmada ee muddada dheer. Waxaa loola shaqeynayaa in lagu daaweeyo hypogonadism iyo gonadal la'aanta, jimicsiga jinsiga, dhalmo la'aanta, eunuchism, iyo cryptorchidism. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo dhiigbaxa aan caadiga ahayn ee haweenka, cilladda menopausal, kansarka naasaha iyo kansarka ilmo-galeenka. Waxa kale oo lagu daweyn karaa cirrhosis, anemia aemia, osteoporosis iyo cuduro kale oo badan.
Soo iibso Testosterone budada ka samee Buyaas.com
Farqiga Ugu Muhiimsan ee u dhexeeya Tijaabinta Enanthate iyo Cypionate Test
Testosterone: Waxqabadka- Bareecada-Beddelidda, bedelida Eberhard Njeschlag, Hermann M. Behre, bogga 417, 533-560
Buugaagta Buugaagta Caafimaadka ee Endocrinology E-Book, Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg, Page 759-780
Anabolic-Androgenic Stteroids, waxaa qoray Edward Charles D. Kochakian, bogga 46-60